Kulan lagu Taageeray Natiijada shirkii dib u heshiisiinta Jubbooyinka oo lagu qabtay Magaalada Muqdisho |
Kulan lagu Taageeray Natiijada shirkii dib u heshiisiinta Jubbooyinka oo lagu qabtay Magaalada Muqdisho
Khamiis, November 08, 2013 — Munasabada lagu taageerayay natiijadii kasoo baxay shirkii dib u heshiisiinta Jubbooyinka ee shalay lagu soo gaba-gebeeyey ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho taasoo uu soo qabanqaabiyay guddiga xiriirka Jubbooyinka.
Waxaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadda Suldaan Maxamed Muuse (Luga-loox), Suldaan Cabdikaafi Suldaan C/llaahi, Suldaan Aadan Garab, Suldaan Maxamed Sheekh Axmed iyo qaar kale oo si buuxda u taageeray natiijada kasoo baxday shirweynaha gobollada Jubbooyinka.
Sidoo kael, waxaa ka hadlay kulanka, C/qaadir X. Maxamed (Luga-dheere) oo ka mid ahaa saxiixayaasha heshiiskii Jubbooyinka, isagoo si buuxda u taageeray heshiiskaas, wuxuuna ka mahad-celiyay dadaalka ay dowladda Soomaaliya ku bixisay heshiiskan.
“Waxaan u mahad-celinaynaa dadaalka beesha caalamka ku wado ka miro dhalinta heshiiska Jubbooyinka, waxaana si gaar ah ugu mahad-celinaynaa dowladda Itoobiya oo dadaal badan ku bixisay nabadeynta iyo xal u helidda arrimaha Jubbooyinka, sidoo kale urur goboleedka IGAD ayaa mahad-celin mudan,” ayuu yiri Suldaan Luga-dheere.
Gaba-gabadii waxaa munaasabadda khudbad ka jeediyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda Gaashaandhigga isagoo ka mahadceliyay sida midnimada leh ee loo taageeray heshiiskii Jubbooyinka isagoo digniin u diray cid kasta oo ku howlan carqaladeynta heshiiskaas, isagoo sheegay in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan.